Photoshop lasa programa miaraka amin'ny AI | Famoronana an-tserasera
Adobe manavao ny Photoshop ho lasa programa AI mandroso indrindra ho an'ny famoronana
Manuel Ramirez | | Graphic Design, maro
Andro tsara ho antsika izay niara-niasa tamin'ny Photoshop nandritra ny taona maro (20 taona mahery ho ahy), ary izay mitondra antsika hankafy ny fanavaozana vaovao tanterin'ny Adobe an'ny programa miaraka amin'i AI o Ny faharanitan-tsaina artifisialy mandroso kokoa ho an'ny famoronana.
Izany hoe, raha manana isika niresaka momba an'i Adobe Sensei imbetsaka, amin'ity indray mitoraka ity, ny Adobe dia naka fiasa sasany tamin'ny ambaratonga hafa tao amin'ny Photoshop izay hodinihinay eto ambany. Izy rehetra dia avy amin'ny Adobe MAX ary mandritra ny telo andro dia haneho mpanakanto ekena maro izy ireo.
Androany i Adobe Photoshop dia manana nohavaozina miaraka amin'ny vaovao 5 tena ilaina mifandraika amin'ny AI. Ny fampiasana ny haitao AI dia ahafahantsika miasa tsy mbola nisy toy izany tamin'ny alàlan'ny fampihenana ny fotoana amin'ny asa sasany ary ny fifantohana bebe kokoa amin'ny famoronana, ny famoronana ary ny hevitra.
Ireto zava-baovao dimy ireto dia ny Sivana neural, Sky replacement, tontonana vaovao hahitana ary fisafidianana Refine Edge roa vaovao. Ny Neural Filters na Neural Filters dia miaraka amina andiana sivana vaovao izay ao anaty fanjakana beta, saingy manana kalitao ampy izany hahafahantsika manaikitra azy ireo. Midika izany fa hihatsara izy ireo noho ny fianaran'ilay milina rehefa mandeha ny fotoana.
La fahaizana hisolo ny lanitra, izay efa noresahantsika herinandro vitsivitsy lasa izay, mahay "manavaka" ny lanitra sy ny sisa amin'ny firafitra. Hitanay sahady ny fahaizany lehibe manova ny sehatra ho lasa sehatra mavitrika sy mahatalanjona kokoa.
Amin'ny lafiny iray manana ny tontonana Discover izay feno fitaovana sy tetika izahay hanampy antsika hiasa haingana kokoa. Tompon'andraikitra amin'ny fanolorana torohevitra sy tolo-kevitra mifototra amin'ny asa ataontsika ary misy hetsika tsindry iray monja mba hitsimbinana fotoana.
Ny Refine Edge sy ny Reure Hair dia samy mampiasa AI hanatsarana ny safidinay izay mety hahitana zavatra izay somary "sarotra" fisafidianana, toy ny volo tsara.
Adobe koa dia mampiseho ny ampahany amin'ny tanjony amin'ireo fitaovana ireo Efa manana ny fomba fisafidianana olona na zavatra izahay, hanondroana fa ny ambiny amin'ireo fitaovana dia hampiditra AI hanatsara ny fizotran'asa.
Una Photoshop izay nahazo fanavaozana lehibe ary manampy amin'ny hafa izany vaovao toa an'i Fresco ho an'ny iPhone na Illustrator ho an'ny iPad.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » Graphic Design » Adobe manavao ny Photoshop ho lasa programa AI mandroso indrindra ho an'ny famoronana
Lohahevitra WordPress maimaim-poana tsara indrindra
Adobe dia namoaka Illustrator ho an'ny iPad sy Fresco ho an'ny iPhone